Sida loo Dammaanad Qaado Shabakadaadu Liiska Madoow ee Emailka | Martech Zone
Talaado, Febraayo 19, 2008 Jimco, Diisambar 12, 2014 Douglas Karr
Waxaan dib u eegi jirnay mid ka mid ah boggeena macaamiisha maanta. Waxay u dhaqaaqi doonaan emaylkeena is-dhexgalka dhowaan - taas oo ah wax fiican. Waxaan qiyaasayaa in websaydhyadoodu ay horeba ugu jireen liiska madow ... waa tan sababta…
Waxay ku leeyihiin foomka xiriirka bogooda internetka. Way fiicantahay in ku filan, farabadan oo goobo ah si ay ugu diraan dhammaan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyaga si ay ugu qoraan hindisaha emaylkooda. Aragti dhow, in kastoo, runtiina waa aalad ay u dejiyeen kuwa wax basaasa si ay uga faa'iideystaan.
<INPUT type=hidden value="qofkasta@someone.com"magaca =" sendto "/>
Ogow meelaha qarsoon ee aad ku qori karto cinwaanka emaylka! Imtixaan ahaan, waxaan jiiday foomka, oo aan dul dhigay cinwaankayga iimaylka ah, oo waxaan dhigay xiriiriye aagga kale ee qarsoon. Waxaan riixay gudbinta iyo daqiiqad kadib, waxaan kuhelay emaylka SPAM sanduuqa sanduuqa!
Tani waa sida spammers ay u sii wadi karaan dirista emaylka iyagoon ka walwalaynin xannibaadda. Waxa kaliya ee ay u baahan yihiin waa inay ka helaan foom sidan oo kale ah website-kaaga waxayna qori karaan nidaam riixaya malaayiin emayl habeenki oo dhan. Ayaa la xanibay? Maaha spammerka… shirkadu sameyso!
Foomkan gaarka ahi wuxuu ku yaal degelka a billion ganacsiga dollar, ma ahan ganacsi yar. Waxaana jira kumanaan ka mid ah noocyada noocan ah ee qaabab amni-darrada ah meel kasta oo shabaqa ah. Waxyaabaha layaabka leh ee halkan ka jira ayaa ah inay ku sameeyeen bogga ASP - oo ah bog si fudud u samayn kara raadinta cinwaanada emaylka ee server-ka oo ay ku lifaaqan yihiin.
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso, dabcan waan u sheegnay!
Tags: emaylka liiska madowFoomka Emailkafoomka nuglaanta foomkafoomka spam
Febraayo 19, 2008 saacadu markay tahay 11: 19 AM
Shakhsiyan, waan ka shakisanahay qofkasta oo aan haysan cinwaan emayl ah oo ku qoran boggooda oo kaliya foomka xiriirka, laakiin waxay umuuqataa inay tahay wadada kaliya ee 100% lagu sameeyo. Waxaan kale oo aan jeclahay cinwaanada emaylka ee dadku arki karo laakiin ay tahay inay ku qoraan. Malaha Flash oo gundhigiisu wuxuu noqon lahaa wado kale. Ma waxaad tahay nin kaliya oo ah foomka xiriirka?
Febraayo 19, 2008 saacadu markay tahay 11: 35 AM
Ha ka shakinin - waxaan kaliya isku dayeynaa inaan is ilaalino. Ujeedada lagala xariirayo IS si markaa dadku ay wali nala soo xiriiraan iyaga oo aan naga furin spambots.
Feb 19, 2008 markay ahayd 12:49 PM
@Stephen Waad ku saxantahay in barnaamijyo badan oo qora bots spam ay caajis yihiin. Waxaan ula jeedaa, waad turxaan bixin kartaa natiijooyinka http://tinyurl.com/yuje9z oo hel boqolaal kun oo cinwaanno ah spam.
Difaaca ugu fiican ayaa wali ah joojinta daabacaadda cinwaanada emaylka, iyo isticmaal a foomka shabakadda halkii.
Feb 21, 2008 markay ahayd 3:26 PM
Waan fahmay waxaad labadiinu leedihiin. Aniga ahaan, foomka xiriirku wuxuu dareemayaa inuu lamid yahay lambar 1-800 halkii nambar mobayl lagu qaadan lahaa kaarka ganacsiga. Waxay dareemeysaa habka tikidhada shirkadaha / taageerada.
Feb 21, 2008 markay ahayd 3:31 PM
Waxaan aaminsanahay in PDF-yada ay yihiin qoraal cad (ugu yaraan Google iyaga ayaaba ku faafi kara iyaga) e-maylkaaguna wuxuu ku jiraa resumeygaaga, Doug.
Waxaan ka helay qoraalkaaga blog mid aad u xiiso badan, laakiin si sax ah uma fahmin sida tani u shaqeyso.
Haddii aad buuxiso foomkan, sidee ayaa khamaarka spam u helaan cinwaanka emaylkaaga?
Haddii degelku ku leeyahay beero qarsoodi ah cinwaanka emaylkaaga markasta, markaa way iska cadahay sida khamaarka khayaanada ahi u helaan.
Laakiin markaad buuxinayso, miyaanad kaliya ku dhicin soo gudbinta, ka dibna meelaha qarsoon ayaa tagaya, sax? Miyuu spam bot leeyahay barnaamij ku yaal boggaas oo qabta waxaad ku qorto ama waxa ay ku dhejiso bogagga qarsoon intaad isticmaaleysid?
Ma fahmin Fadlan miyaad sharxi kartaa tan intaa ka badan?
Maxaase la qaban karaa? Sideed u hirgalin foomka ah in spam botyada aysan sidan sameyn karin sidoo kale? Ma wax uun baa ah in aan loo isticmaalin meelaha qarsoon cinwaanada emaylka ama intaas ma ka badan tahay?
Booqde ahaan, wax khatar ah kuma sugnid. Arrintu waxay u taal dadka foomkan dhigay. Spammer wuxuu awood u leeyahay inuu 'sarreeyo' foomka isla markaana u diro spam isagoo adeegsanaya. Waa dhaqan xun oo shirkaddu ku soo rogtay degelladooda.
Hal su'aal oo dheeri ah if .Haddii aan gabi ahaanba waa inaan cinwaanka emaylkayga geliyaa bog, haddaba waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo? Ammaan ma tahay in la isticmaalo lambarrada astaamaha ee lix-geesoodka ah?
Spammers waxay leeyihiin farsamooyin gurguurasho aad u adag oo awood u leh inay ku soo gurtaan cinwaanada emaylka qaabab dhowr ah. Waxaan si daacad ah uga daali lahaa waligay cinwaanka iimaylkayga oo aan galiyaa bog internet ah, taas bedelkeedana, waxaan geyn lahaa foomka xiriirka.